6 Baraingo tsara indrindra ho an'ny banky misokatra - Toro-hevitra sy torohevitra
Ny firenena 6 tsara indrindra hanokatra kaonty Banky Offshore
Hanolotra torohevitra isan-karazany betsaka ny olona rehefa tonga amin'ny bola tsara indrindra any amin'ny banky. Tsy hoe satria ny sasany amin'izy ireo dia tsy misy diso - misy safidy maromaro ao. Ny firenena banky lavorary ho an'ny olona iray na orinasa dia mety tsy ho tsara indrindra ho an'ny hafa.
Misy ihany anefa ireo firenena izay mbola miresaka momba ny mpampiasa vola an-tsambo. Ao amin'ity lahatsoratra ity, hizaha ny sasany amin'ireo tsara indrindra isika offshore bank firenena - ary inona no tsara indrindra amin'izy ireo.
Tetik'asa tsara indrindra ho an'ny tombontsoam-bola - Nosy Cayman
Ny Nosy Cayman dia manana laza matanjaka iraisam-pirenena, manolotra serivisy ara-bola feno amin'ny mpanjifa marobe. Ny Nosy koa dia toeram-pialofana hetra. Teny iray izay nofaritan'i Investopedia ho firenena izay manolotra fikajiana hetra arahin'olon-tsotra sy mpandraharaha vahiny. Ankoatra izany, dia manana tontolo iainana ara-politika sy ara-ekonomika, izay fepetra takian'ny ankamaroan'ny olona.
Tsy misy fiantohana mivantana ny Cayman Islands fa loharano goavana amin'ny banky ivelan'ny banky, hoy Cayman.com. Tsy misy ny haba amin'ny vola, ny orinasa, ny fananana, ny fananana, ny karama, na ny fidiram-bola. Ankoatr'izay dia tsy misy fanaraha-mason'ny fifanakalozana, izay ahafahana mandefa ny fifindramanana maimaim-poana any ivelany sy avy any amin'ireo nosy any amin'ny vola hafa. Tsy misy ny fepetra momba ny fitehirizan-tsakafo.
Betsaka ny seranam-piaramanidina hetra. Noho izany, nanao ezaka be ny Caymans mba hahazoana ny lazany ho toerana mendrika ho an'ny banky any ivelany. Ekena ho iray amin'ny ivon-toerana iraisam-pirenena 10 ambony indrindra manerantany. Ankoatr'izay, ny lalàna momba ny banky Cayman Islands dia ahitana fehin-kevitra tsiambaratelo ho an'ny mpanjifany. Ny nosy dia namolavola rafitra mifehy mafy mifehy ny serivisy ho an'ny banky any ivelany. Fanampin'izay, izy ireo dia mifaninana amin'ny tsenam-bola Euro.
Zava-dehibe ny manamarika fa, na dia manolotra tombontsoa hetra aza i Caymans; firenena maro, toy ny Etazonia sy Angletera, no manery ny mponina sy ny mponina amin'ny fidiram-bola maneran-tany.
Firenena tsara indrindra ho an'ny harena - Singapore
Manana $ 200,000 ve ianao sa mihoatra ny tianao hametraka ao anaty kaonty any ivelany? I Singapore angamba no safidinao tsara indrindra. Matetika dia tsotra ny fizotran'ny kaonty. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, afaka manangana kaonty ianao fa tsy mandeha any Singapore intsony, hoy i Sing Sav nanazava.
Ny iray amin'ireo antony nisafidianan'ny olona an'i Singapore dia noho ny lazany ho toerana azo antoka sy azo antoka fitehirizana ny fananana. Manana fitsipika hentitra ny firenena amin'ny sehatry ny banky. Midika izany fa arovana tsara ny harenanao. Manana ny teknolojia manodinkodina koa ny bankin'izy ireo. Io dia ahafahanao milamina fiarovana ary fidirana mora amin'ny fanananao koa.
Manolotra serivisy fitantanana harena, vola, trano, kaonty, i Singapore, hitaky ny volanao. Misy ihany koa ny sehatra ara-barotra maromaro hanararaotra ny tsena any Singapore. Fanampin'izany, manome lalana ho anao any Etazonia, Hong Kong, Shina, Eropa ary maro hafa. Ny kaonty dia misy amin'ny karazam-bola isan-karazany, mampihena ny fidiran'ny saram-pifanakalozana avo. Manana banke management management mahay ihany koa ny banky any Singapore. Ireo matihanina ireo dia natokana hanampy anao hahita ny tetikady ara-bola tsara indrindra amin'ny volanao.
Ny firenena tsara indrindra ho an'ny fiarovana amin'ny angovo - Soisa
Efa ela ny Switzerland no malaza ho iray amin'ireo banky tsara indrindra any ivelany mba hanafina vola. Ny antony iray lehibe indrindra amin'izany dia ny lalàna momba ny tsiambaratelo hentitra amin'ny firenena. Manomboka amin'ny taona 300 izy ireo, manazava ny hevitry ny Stuff Works. Ny lalàna Soisa dia mandrara ny banky tsy hamoaka fampahalalana momba ny kaontinao raha tsy misy ny fanekenao. Ny bankerera mandika ity lalàna ity dia mety higadra enim-bolana. Ambonin'izany, afaka manatsara azy ireo amin'ny frantsa 50,000 Swiss ny manampahefana. Ny hany tokana amin'io lalàna momba ny tsiambaratelo io dia amin'ny raharaha heloka bevava. Ambonin'izany dia misy tatitra isan-taona momba ny manampahefana misahana ny hetra ho an'ny hetra mba hisorohana ny fialàn'ny hetra.
Ny drafitra fiarovana tsara indrindra dia manala ny fanananao avy any amin'ny firenenao; sy ny efitranony. Mba hanaovana izany, zava-dehibe ny mitazona ny kaontinao any amin'ny orinasa iray orinasa orinasa. Ny lalàna momba ny tsiambaratelo any Soisa miaraka amin'ny lalàna fiarovana ny Nosy Cook na Nevis dia manome izany.
Ny antony iray mahatonga ny lazan'i Soisa ho banky ho an'ny fiarovana amin'ny angovo dia ny fahamendrehany ho fampiasana ambany saran'ny toetrandro. Ny fari-piadidiana politika sy toekarena any Soisa dia miorina. Ny Fikambanan'ny Banky Federaly (SBA) dia manara-maso ireo banky. Tsy mandoa hetra amin'ny tombontsoa, ​​ny dividends na ny lova ny any Soisa, raha toa ka tsy mahazo izany tombony izany ny orinasa Soisa. Ny lalàna Soisa dia mitaky ny lanjany lehibe ho an'ny kapitalisma koa. Ho an'ny 2004, ny SBA dia nanova ny Fifanarahana momba ny fiarovana. Ity fifanarahana ity dia miantoka fa raha misy ny banky tsy mety, ny mpitrandraka dia mbola mahazo ny fanambarana ara-dalàna.
Ny firenena tsara indrindra ho an'ny orinasa - Nevis
Raha mitady ny hamindra ny orinasa an-dranomasina ianao, ny Nevis dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra. Izany no ahafahantsika mamorona momba ny 70% amin'ireo orinasa afovoan-dranomasina izay ampidirintsika. Ny mahasarika olona maro amin'ireo nosy dia ny fiarovana ny fiarovana, ny vidiny ambany ary ny fenitra ambony. Tena marina izany ho an'ny orinasa Nevis, noho ny lalàna manan-kery momba ny fiarovana. Ny orinasan-tsolika Nevis dia manana rafitra manerantany henjana ary miara-miasa amin'ny fepetra marimaritra iraisana. Tsy misy haba na fitsipika fanampiny ary ny Financial Services Commissions dia manana fenitra ambony.
Ny orinasa Nevis dia manana tombony goavana ho an'ny tompon'ny orinasa sy ny tomponandraikitry / tompon 'andraikitra. Ny orinasa dia afaka mifindra monina any an-toerana na avy amin'ny sehatra hafa, ary koa ny fiorenana na fiarahana amin'ny orinasa Nevis na orinasa vahiny. Tsy misy lalàna mitaky ny orinasan-dry zareo any Nevis. Plus, ny dividends dia mety ambara ataon'ny talen'ny orinasa. Ireo mpiara-mitantana dia manana fepetra fiarovana ary afaka miala amin'ny orinasa amin'ny vidiny ara-drariny. Ary koa, ny orinasan'i Nevis dia afaka mitanisa ny anjarany amin'ny fifanakalozana varotra manerantany. Anisan'izany ny NASDAQ, ny London Stock Exchange, ny Securities Exchange International, ary ny maro hafa.
Ny BVI no mpandresy teo aloha tamin'ity sokajy ity. Saingy amin'ny fitsipika mavesa-danja, ny fahefana-izany dia nanangana ny mari-pahaizana "Go Away" goavana ho an'ny fahefana. Antenaina fa hifoha izy ireo ary hahatsapa fa misy safidy hafa manerana izao tontolo izao. Angamba ny manampahefana dia hisolo ny manampahefana amin'izao fotoana izao amin'ireo izay manana fifandraisana amin'ny orinasa. Avy eo, mety ho afaka hamerina ny solony taloha izy ireo.
Firenena tsara indrindra ho an'ny tombontsoam-bola be indrindra - Belize
Raha mikaroka ny tahan'ny zanabola amin'ny banky tsara indrindra ianao, dia mety tsy ho ao amin'io lisitra io intsony i Belize. Fa kosa, ny fikarohanao dia mety mampiseho firenena toa an'i Okraina, izay mirehareha amin'ny tahan'ny zanabola 20. Tsara feo, sa tsy izany? Manao izany izy, mandra-pandinanao zavatra toy ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fiarovana ny banky Ny inflation ao Okraina dia 49%. Izany dia fahasamihafana amin'ny 29% izay manome azy ho ambany kely ambany ny tahan'ny zanabola, ho an'ny Tarika Go Banking. Manana olana roa lehibe i Okraina: dingana iray amin'ny fanadiovana vola izany ary mihena ny vola any Okraina. Midika izany fa tsy azo antoka ny volanao, ary mety tsy hahita an'izany 20% mahafinaritra izany ianao amin'ny fiverenanao.
Koa nahoana Belize? Tahaka an'ity fanoratana ity, manana tahan'ny zanabola tena izy eo amin'ny 2.54% i Belize. Io dia manana taham-pisondrotana eo akaikin'ny 0%, izany hoe eo anelanelan'ny 2019 isaky ny toekarena varotra. Izany dia somary avo kokoa noho ireo firenena hafa voalaza ato amin'ity lahatsoratra ity, ankoatry ny Etazonia sy Canada. Na dia tsy misy 20% aza izany, i Belize dia firenena iray manana toerana mahasoa maro hafa. Lan Sluder nanazava fa ny kaonty iraisam-pirenena Belizeana dia tsy miankina amin'ny hetra eo an-toerana na ny fetra fanaraha-maso amin'ny fifanakalozana. Ny tompon'ny kaonty dia afaka misafidy amin'ny ankamaroan'ny vola lehibe, ary ny fifanakalozana fifanakalozana eo anelanelan'i Belize sy Etazonia dia 2: 1. Fantatra ihany koa ny firenena amin'ny fanamafisana ny fiainana manokan'ny mpanjifany. Ankoatr'izay, ny banky iraisampirenena Belizean dia miankina amin'ny mpanjifany iraisampirenena ihany - tsy avelan'ny mpanjifany eo an-toerana.
Firenena tsara indrindra ho an'ny fiarovana - Alemana
Ao amin'ny lisitry ny banky azo antoka indrindra an'ny Global Finance, ny banky iray any Alemà dia mandray ny laharana voalohany. Alemana dia mitazona slot telo hafa ao anatin'ny folo voalohany, ho an'ny enina ao anatin'ny lisitry ny 50. fandoavam-bola, orinasa Alemanina, mizara ny antony lehibe ao ambadiky i Alemania ho loharanon'ny banky eo amoron-dranomasina azo antoka indrindra. Nilaza izy ireo fa ny fahamarinan'ny firenena; indrindra ara-toekarena. Io dia loharano malaza ho an'ny kaonty fitahirizana, fisavana ary fitahirizana.
Satria ny firenena Alemana dia firenena maoderina sy mandroso, ny tompon'ny kaonty dia mahazo fidirana amin'ny serivisy amin'ny aterineto sy ATM, 24 / 7. Amin'ny tranga maro dia tsy mila manatrika ny fanokafana kaonty any Alemaina ianao. Fanampin'izany, ny vidim-panavotana sy ny fikojakojana matetika dia ambany. Ny banky sasany koa dia manome ny safidy amin'ny fahazoana Visa na MasterCard credit card koa. Ny tombony dia mbola bebe kokoa raha tianao ny mandeha. Izany hoe, raha manana kaonty any Euro dia mety mahasoa manerana an'i Eoropa. Plus, misy banky manana tombony fanampiny ho an'ireo mpandeha matetika.
Tsy toerana tsara izany raha manana fanarahan-dalàna taitra aminao manaraka. Manatanteraka ny fitsarana avy any ivelany i Alemana. Ka raha miaro ny fanananao no tanjonao, mandehana any an-toeran-kafa.
Birao tsara indrindra amin'ny Banky Offshore amin'ny fanokafana kaonty
Ny fanokafana kaonty any amin'ny iray amin'ireo firenena ireo dia miovaova ny fahasarotana sy ny fandaniana amin'ny firenena sy banky. Vonona ve ianao amin'ny dingana manaraka ary hanokatra ny kaontinao any ivelany anao na hahazo fampahalalana bebe kokoa? Aza misalasala miresaka amin'ny iray amin'ireo matihanina ara-bola. Izy ireo dia afaka mahazo antoka fa mahazo ny zavatra betsaka indrindra amin'ny kaontinao ianao. Fanampin'izay, afaka miasa amin'ny kaonty ny mpiasanay mba hahazoana antoka fa manaraka ny lalàna mifehy ny hetra ilaina ianao.
Investopedia dia manolotra zavatra fanampiny tokony hohadinoina rehefa manokatra kaonty ivelany. Ny fepetra fototra dia mitovy amin'ny fanokafana kaonty ao amin'ny firenenao an-tranonao. Hasaina hangataka fampahalalana manokana ianao toy ny anaranao, daty nahaterahanao, adiresy, zom-pirenena ary ny fiasanao. Na ireo firenena manana lalàm-pananana matanjaka indrindra aza no hanontany an'izany. Izany dia satria zava-dehibe rehefa manangana ny kaontinao ianao dia afaka manamarina ny maha-izy anao ny banky.
Ny antontan-taratasy sasany izay ilainao amin'ny kaontinao dia misy ireto manaraka ireto. Azo inoana fa mangataka kopia avy amin'ny fahazoan-dàlana sy / na pasipaoro sy porofon'ny adiresy ianao. Ankoatr'izay, andrim-panjakana maro no mangataka antontan-taratasy ara-bola avy amin'ny bankinao ankehitriny. Azon'izy ireo atao ny manontany momba ny toetran'ny fifanakalozana izay antenaina handalo amin'ny kaonty. Ankoatr'izay dia mila manamarina ny maha-izy anao izy ireo. Ireo dia fitsipika manohitra ny famotsiam-bola. Te-hahazo antoka ny banky fa tsy misy olona mampiasa ny serivisy amin'ny hetsika tsy ara-dalàna.
Famaranana - Fitadiavana ny Banky havanana
Araka ny hitanao dia tsy misy endrika-mifanentana rehetra. Betsaka ny misafidy raha misafidy ny firenena izay manokatra kaonty banky amoron-dranomasina. Ny firenena rehetra voalaza etsy ambony dia manana tombony mihoatra noho izay "tsara indrindra" ao aminy. Ny sasany dia mandoa zana-bola avo kokoa noho ny banky an-trano. Fantaro hoe iza no firenena mety aminao. Mba hanaovana izany dia afaka mitady ny fanampian'ny iray amin'ireo matihanina ara-bola za-draharaha isika. Azafady azafady azafady ny fangatahana fangatahana na nomeraon-telefaona amin'ity pejy ity Azonao atao ny mifandray aminay amin'ny fampiasana ny iray amin'ireo fomba ireo. Avy eo ianao dia afaka manomboka amin'ny kaonty offshore izay tena mahasoa anao.
Rehefa tonga amin'ny fiarovana ny sarinao ara-bola sy manao drafitra ny fiarovana anao, tadidio ireo torohevitra ireo. Ankoatr'izay, ny rafitra ara-bola azo antoka sy azo antoka indrindra eto amin'izao tontolo izao no tianao. Miankina amin'ny fahefana nofidianao, ity fikambanana ity dia manana fifandraisana amin'ireo banky fiarovana azo antoka izay manome ny safidy indrindra sy ny fiarovana.
Ny banky any ivelany na banky any ivelany dia manondro ireo andrim-panjakana mpamatsy vola sy fampiasambola maro. Hita any amin'ny firenena sy sehatra hafa izy ireo ankoatry ny firenena an-tranon'ny mpanam-bola. Amin'ny lafiny ara-teknika dia afaka mandinika banky any ivelany izay mahatratra ny fepetra voalaza etsy ambony. Ankoatr'izay, ny matihanina amin'ny ankapobeny dia mitahiry ny teny ho an'ny andrim-panjakana mpikirakira ny banky izay misy ny fiheveran'izy ireo ny tsiambaratelo manokana.
Hatramin'ny niandohan'izy ireo, ny Offshore Banks, dia nitovy tamina media tsy ara-drariny na ny fitsarana an-trano. Ny fiampangana dia avy amin'ny fanalavoana hetra hatrany amin'ny fanodinkodinana vola. Saingy diniho tsara ny tanjon'ireo kaonty any amin'ny oniversite any ivelany. Avy eo, manaova fikarohana tsy misy ahiahy mba handinihana hoe aiza no misy ny vola tsy ara-dalàna na "nohamasinina." Ity dia hanazava ny zava-misy. Ny fiampangana diso hafa dia mifototra amin'ny fanakianana tontolo iainana tsy azo antoka, ny fitsipi-piainana ratsy, sns.
Indray, ireo dia tsy nahazo lavitra ny fahamarinana. Ny ankabeazan'ireo pejin'ny banky eo am-pitan'ny banky rehetra dia misy lalàm-pitsipika tena mahomby sy maharitra. Izany dia satria izy ireo mahaliana indrindra dia ny misarika sy hitazona ireo mpamatsy vola. Ny manampahefana dia manome lanja ireo fitsipika ireo ho amin'ny fikarakarana ny filàn'ny tompon-trosa. Ny ankamaroan'ireny fanjakàna ireny dia miantehitra amin'ny renivohitra any ivelany izay mitazona ny bankiny ho antony lehibe indrindra ara-toekarena. Fanampin'izay, ireo banky ireo no tena loharanon'ny fampiasam-bola avy any ivelany.
Ny famaritana midadasika amin'ny banky Offshore dia bank mipetraka ao amin'ny faritany na firenena izay tsy mitovy amin'ny fanapahana na firenena mipetraka amin'ny mpamatsy vola na mpampiasa vola. Iray amin'ireo tombontsoa betsaka amin'ny fahazoana kaonty amin'ny banky Offshore dia hoe ao amin'ny toeram-pialofana hetra izy ireo. Ankoatr'izay, manana lalàna manome fiarovana ny fananana sy tsiambaratelo ho an'ny tompon'ny banky izy ireo. Ireo fanjakàna ireo dia matetika mamela ny fialan-tsasatra faneriterena momba ny karazan-kaonty any amin'ny banky ivelany. Misy ny fahazoan-dàlana manome ny fetra mety hateraky ny mpamatsy vola na mpampiasa vola. Araka izany, ireo mpanapa-kevitra dia manondro ny fomba itantanana ny banky sy manodinkodina ny vola ho an'ny fiarovana ambony indrindra. Na izany aza, ny mpanondrana dia maniry ny hanome ireo mpanaram-bola betsaka amin'ny safidy banky sy fampiasam-bola betsaka. Io fihenam-bidy amin'ny fihenan'ny mpampindram-bola io.
Ny faritany midadasika indrindra malaza dia manome fihenam-bidy be loatra. Raha izany, ireo any amin'ny firenena sasany, toa an'i Etazonia, izay mandoa hetra amin'ny olom-pireneny eran'izao tontolo izao. Ho an'ireo tanjona eto dia tsy hifantoka amin'ireo voaporofo ihany izahay fa hanome tombony azo isaina araka ny voasoritra etsy ambony. Ireo banky eo amoron-dranomasina ireo dia mety ho hita any amin'ny nosy-fanjakana toa ny Caymans na Channel Island. Raha tsy izany dia mety ho any amin'ny firenena voafandrika toa an'i Soisa izy ireo. Soisa nandritra ny zato taona mahery i Switzerland, ary lava noho ireo firenena nosy.
Betsaka ny resaka resahana momba ny fiainana manokan'ny banky Swiss. Tsikaritrareo fa ny banky soisa ihany izay nanana olana dia ireo banky misy sampana any ivelan'i Switzerland. Credit Suisse sy UBS dia manana fisian'i Etazonia lehibe. Araka izany, ireo mpanara-maso amerikana dia afaka manana ny lalany amin'ireny banky ireny. Ireo izay manana toerana misy an'i Soisa dia manohy mitahiry ny fiainana manokana.
Araka ny voalaza ao amin'ny andiany fanokafana dia misy hevi-diso sy angano maro mifandraika amin'ny kaonty any ivelany. Ny banky eo amoron-dranomasina ve no ilay mpamatsy vola sy mpamono olona? Vakio ny fizarana angano momba ny banky amin'ity tranonkala ity raha te hahalala bebe kokoa. Ao amin'ity lahatsoratra ity, manana fampahalalana fanampiny momba ny angano-kaontin'ny banky offshore izay tokony hojerena.
Aiza no hiorina amin'ny kaonty Offshore?
Zava-dehibe ny misafidiananao ny sehatra sahaza anao rehefa manapa-kevitra izay fanaperana hampiasaina ho toy ny fanapaha-pahefana any ivelany. Ny ankamaroan'ny fitsarana any ivelany dia misy fitsipika hentitra sy hentitra. Izy ireo dia napetraka mba hiarovana ny fametrahana sy ny fitazonana ny tsiambaratelo. Na izany aza, ny sasany dia mandanja ny tombotsoany amin'ny hetra, ny hafa kosa amin'ny tsiambaratelo, sy ny sisa.
Na dia samy manolotra tontolo tsiambaratelo sy azo antoka aza izy rehetra, dia tokony hojerena ny hambara momba ny tanjon'ny banky. Avy eo azonao atao ny misafidy ny fahefana. Ny vitsy an'isa any amin'ny faritany any ivelany dia manao asa mahantra amin'ny fitantanana sy ny famerenany ny rafi-bolam-bolany. Saingy ny mpampiasa vola na mpanolo-tsaina nampita dia noheveriny ho tsy mendrika ho an'ny tenany na ny mpanjifany. Ankoatr'izay, ireo fanapahana tsy dia voalamina sy mihazakazaka ity dia matetika nozahin'ireo tompon'andraikitra tsy manara-dalàna. Noho izany, manaporofo ny lasibatra mora foana ao amin'ny FATF (Financial Action Task Force izy ireo) mitady fikobiana vola, na hetsika heloka bevava hafa.
Ity misy lahatsoratra mifandraika amin'ny Cayman Islands Banks ary ny iray hafa
Belize Banking. Eto ianao dia hahita fampahalalana misimisy kokoa momba ireo faritany roa malaza ireo.
Tantaran'ny Banky Offshore Account
Tena mampalahelo fa ny Eoropeana dia efa navesatra be foana hetra enta-mavesatra. Izany dia marina tany amin'ny nosy anglisy tahaka ny tany amin'ny kontinanta. Ny Eropeana dia niatrika ny fahatsinjovana ny fananany harena mafy dia mihinana sy mihena ny harena. Izay rehetra azo tamin'ny tanan'ny mpamory hetra dia namabo ny fananany. Noho izany, ny kaontinanta dia efa masaka ho vahaolana.
Avy eo dia nisy vahaolana. Ny firenena kely sy nosy antsoina hoe Channel Island dia nipoitra hevitra. Resy lahatra izy ireo fa ireo mpanendaka mpangoron-karena izay mametraka ny vola apetraka ao amin'ny bankiny dia afaka tsy ho jerena; noho izany, ny vesatry ny hetra mavesatra. Ireo tombony ireo dia nandresy lahatra ny Eoropeana manankarena maro. Tsy ela dia niroborobo io serivisy io. Ny fahefana kely hafa dia nahatsikaritra. Izy ireo ihany koa dia nanjary mailo amin'ny andriambola mahasarika renivohitra ary nanomboka nanako maso ny rafi-bolany izy ireo. Firenena vitsy no nandika lalàna sy fitsipika momba ny banky mahomby. Noho izany, nanamaivana ny ahiahin'ireo mpampiasa vola sy mpampindram-bola izy ireo. Tonga hatrany am-piandohana ilay banky tany ivelany.
Ary taoriana kelin'izay dia nanjary nifanaraka tamin'ny fanjakan'olon-tsotra sy ny faritany hafa. Nanolotra banky azo antoka sy azo antoka ary tsiambaratelo ny fitsipika azo ampiharina. Vetivety foana dia ny "tontolo no mahalala." Nanomboka nijery ireo toeram-pialofana ireo ireo ho vahaolana mahomby ho an'ny filan'izy ireo. Ireo Amerikana, afrikanina, Asyria, sns, dia nahita ireny kaonty amin'ny offshore io dia tena mahasoa noho ny antony marobe. Tsy toy ny bankiny any an-trano, ireo banky offshore ireo dia tsy voatery resahina ara-politika na fifandirana ara-toekarena. Ny ankamaroan'ny olona nahita fianarana dia nahalala azy ireo noho ny fahamarinan-dry zareo ara-politika sy ara-bola sy ny tombontsoan'ny fiarovana ny fananana.
Banky Offshore ao amin'ny Media
Tao anatin'ny taona maro izay dia efa nampiasaina bebe kokoa izy ireo ary izany no hita maso kokoa. Nandritra izany fotoana izany, ny fampahalalam-baovao dia naneho tsy an-drariny ny kaonty amin'ny banky vahiny. Fanampin'izay, ny fanapahana lehibe kokoa dia mampivadika ny lazan'ny besinimaro ho toy ny fiatoan'ny lozisialy ambanin'ny tany. Ireny firenena manara-ketra sy banky lafo be ireny dia mampiseho azy ireo ho fialokalofana azo amin'ny fananana fananana tsy ara-dalàna. Izy ireo dia manandrana mandoko azy ireo ho toy ny toerana voafantina handrafetana ny teti-bolam-panadiovana vola.
Efa ela no fantatry ny mpampindram-bola sy mpikirakira vola fa tsy mety lavitry ny fahamarinana ireo fanavakavahana ireo. Fantatr'izy ireo fa ny banky amoron-dranomasina dia mety ho fananana mahomby amin'ny fananana; ho fiarovana mafy ho an'ny vola mila fiarovana, azo antoka, tsiambaratelo. Ankoatr'izay, fantatr'izy ireo fa afaka miaro ny volany ireo banky ireo. Izany hoe, arenany ireo fananana avy amin'ny ady an-trano, ara-toekarena, na politika ara-politika ao amin'ny fireneny. Androany, ny banky any ivelany dia mbola manohy mihazona ny faran'izy ireo. Mbola manohy toeram-pialofana azo antoka izy ireo. Izy ireo dia manome fialokalofana ho an'ireo izay mitady vola hiaro amin'ny vola tsy manan-kery amin'ny fanarahan-dalàna sy hetra.
Betsaka ny mpamatsy vola no mandray soa amin'ny tontolo azo antoka, tsiambaratelo ary ambany hetra. Izany no atolotry ny kaonty banky any ivelany. Zava-dehibe ny manombantombana ny tanjonao ary mifanakalo hevitra momba azy ireo amin'ny talenta mahay, talohan'ny hitsofohan'ny rano tsy nampiakarina. Betsaka ny tombontsoa azo antoka tsy omena amin'ny alàlan'ny fananganana kaonty banky Offshore. Mitombo ny lazan'izy ireo eo amin'ireo mpamatsy vola sy mpamatsy vola amin'ny fanomezana ny toerana azo itahirizana ny banky ary miaro ny fiarovana amin'ny andraikitra sy ny tsiambaratelo. Ankoatr'izay, ny banky any ivelany dia hitohy amin'ity laza sarotra azo amin'ny fiarovana ny fananana, fampihenana hetra (miankina amin'ny fanapahana anao) ary ny tsiambaratelo miafina.
<Ho an'ny toko 6
Ho an'ny toko 8>